घर किन्दा श्रीमती सित्तैमा, घर किन्ने पुरुषले पाउने भए यति राम्री पत्नी
March 21, 2022 AdminLeaveaComment on घर किन्दा श्रीमती सित्तैमा, घर किन्ने पुरुषले पाउने भए यति राम्री पत्नी
एजेन्सी । व्यापार प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न खालका आर्कषक अफरहरु सुनिन्छ । जस्तै, ‘एउटा सामान किन्दा अर्को सामान सित्तैमा’ लगायत अफर सुनिएकै हो । तर भर्खरै यो अफरलाई पनि चुनौति दिँदै बजारमा ‘घर किन्दा श्री मती सित्तैमा’ भन्ने अनौठो अफर अहिले चर्चामा छ ।
यो अनलाइन विज्ञापनको सुरुवाती हिस्सा सामान्य विज्ञापन जस्तो छ र यसमा घरमा रहेका विशेषता उल्लेख गरिएको छ । तर अन्त्यतिर भने दुर्लभ अफर प्रस्तुत गरिएको छ ।
जसमा भनिएको छ जसले यो घर किन्नुहुन्छ उसले यो घरकी मालिक्नीसँग बिहेको प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ ।’ विज्ञापनमा घर मालिक्नीको तस्वीर समेत दिइएको छ । विना लिया नामकी ती ४० वर्षे महिला श्रीमानको मृस त्युसंगै हाल एकल महिलाको रुपमा रहेकी छिन् र उनको आफ्नो सैलुन समेत छ ।यो घर गम्भीर खालका क्रेताहरुको लागि मात्र रहेको र यसमा कुनै सौदाबाजी नहुने विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको छ । जाभा द्विपस्थित स्लेम्यानमा रहेको यो घरको मूल्य ९ करोड ९९ लाख इण्डोनेसियन रुपैयाँ अर्थात् झण्डै ७५ हजार अमेरिकी डलर तोकिएको छ । एएफपीका अनुसार घर मालिक्नी विना लियाको यो विज्ञापन इण्डोनेसियाका संचार माध्यममा मात्र होइन सोसल मिडियामा समेत निकै चर्चित बनिरहेको छ ।
जवान रहन चाहानुहुन्छ र यौ”नशक्ति बढाउन चाहनु हुन्छ भने नियमित गर्नुहो’स् ओखरको सेवन,को’लेस्ट्रोल निकाल्नमा गर्दछ ! नेपाल जडिबुटीको खानी हो । यहाँ हरेक किसिमका रोगका औ षधि पाइन्छ । तर, औषधि चिन्न र प्रयोग विधिबारे भने निकै कमैलाई मात्रै थाहा हुन्छ । नेपालबाट जडिबुटी विदेश निर्यात हुने गरेको छ ।
नेपाल शहरभन्दा पनि ग्रामिण भेग धेरै भएको मुलुक हो । त्यसपछि वन, कान्लाहरु धेरै छन् ।यि क्षेत्रमै धेरै औ षधीय गुण भएका बोटविरुवा, झारपात भेटिन्छ् । यी मध्येको एक हो बहुवर्षीय लहरायुक्त वनस्पति हो।
यो स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी मानिन्छ । कुरिलोमा काँडासहितको काण्ड र मसिना झुप्पादार पात हुन्छन् । यसका टुसालाई विशेषगरी तरकारीको रूपमा बढी प्रयोग गरिन्छ।
जरालाई भने विभिन्न रोगको अचुक औ षधिका रूपमा प्रयोगमा ल्याइन्छ । कुरिलोमा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन भिटामिन फाइबर क्याल्सियमसँगै अन्य विभिन्न विभिन्न पौष्टिक तत्व पाइन्छन् ।
कुरिलोको जराको चूर्ण बनाई नियमित खाएमा यौ’न दुर्बलता र स्तनजन्य रोगलाई फाइदा गर्छ ।
कुरिलोको जराको धुलो दूध वा मनतातो पानीसँग मिसाएर पुरुषले से वन गरेमा वी’र्य बढ्छ । कुरिलोको नियमित सेवन महिलाका लागिसमेत फाइदाजनक हुन्छ । यसले शरीरमा ऊर्जा उत्पन्न गर्छ ।
उनीहरूमा यौ’न दुर्बलता हटाउन, महिनावारी गडबडी ठीक पार्नलगायत कामका लागिसमेत कुरिलो उपयोगी हुन्छ । कुरिलोको नियमित सेवन गरेमा क्यान्सर हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
राजेन्द्र लिङ्देनको खुन उम्लिने भाषण: राजा निदाएको हो मरेको होइन भन्दै गगन, ओली र प्रचण्डको सातो लिए
एमसीसी पास भएको महिना दिन नबित्दै चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपालमा, यस्तो छ योजना !
पकेट खर्च नभएपछि ‘पो र्न मु भी’मा खेलिन्, अनि २१ वर्षमै बनिन् करोडपति (तस्बिरहरू)
यस्ता पुरुषसङ्ग यौ’न स’म्प’र्क गर्न खोज्दिनन महिला भिडीयो